Itaosy : Enin-dahy nanafika, ramatoa iray naratra, lasa ny vola 200 000 ariary – Midi Madagasikara
You Are Here: Home → Faits-Divers → 2014 → avril → 9 → Itaosy : Enin-dahy nanafika, ramatoa iray naratra, lasa ny vola 200 000 ariary
Ny marainan’ny talata tokotokony ho tany amin’ny iray ora tany ho any no nitsofoka tao amin’ny tokantrano iray ireto jiolahy miisa enina. Teny Andramahavola amin’ny faritra Itaosy no nisy ity trano iray misy rihana notafihan’izy ireo tamin’izany. Tsy voavaha ny varavarana tany ambany rihina koa dia niakatra lavarangana ireo olon-dratsy. Novakiany ny varavarana tany ambony ary teo izy ieo no niditra.
Nizara izy ireto ka ny roa niandry tety an-tokontany fa ny telo kosa nanao ny fanafihana tao an-trano. Vao teo an-tokonana ry zalahy dia efa nandeha ny fanapoahana basy tamin’ny alalan’ny tifi-danitra. Natahotra sy nihorohoro ireto dimy mianaka tao an-trano ka tsy nahahetsika fa dia niandry fotsiny izay fidonany. Basy PA no nentin’ireto olon-dratsy nanafika ka notereny ireto tompon-trano hamoaka vola. Tsy nanan-tsafidy izy ireo tamin’izany fa mamy ny miaina ka dia nomena ireto mpanafika ny lelavola mitentina 200 000Ar sy peratra ary kavina volamena teny amin’izy ireo.
Nony azon’ireto mpanafika izany dia nototoiny tamin’ny vody basy ny lohan’ilay renim-pianakaviana tao an-trano. Naratra mafy io farany io.
Lasa nirifatra moa ireto olon-dratsy raha vao nahazo ny vola sy ny zavatra sarobidy tao an-trano. Ireto voatafika kosa dia somary niandry elaela kely vao sahy niantso ny borigadin’ny zandary tetsy Bemasoandro, noho ny tahotra soa mbola misy mihery any ho any ka manao tampody fohy tampoka.
Hanentanan’ny tompon’andraikitry ny borigadin’ny zandary hatrany ny tokony hampandrenesana haingana ny zandary eny an-toerana raha vao misy zava-miseho, na tsy ilay olona tratran’ny fanafihana mivantana ary fa ny mpiara-monina ihany koa dia afaka mampandre an’izy ireo amin’ny alalan’ny antso an-tariby mba hamongorana sy hanenjehana ireto mpanao asa fanafihana .